प’क्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै च’कित ! - NepalTrending
प’क्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै च’कित !
काठमाडौं । भारतीले आफुले गाँ,जा पिउने गरेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । ए’नसीबीले गाँ,जा राखेको आ’रोपमा चर्चित हास्य कलाकार भारती लाई प’क्रा उ गरेको छ । शनिबार, ए’नसीबीले मुम्बईमा ३ स्थानमा छा,पा मा’रेपछि गाँ जा फेला पारेको थियो । हास्य कलाकार भारती र उनका पति हर्षको घरमा पनि छा,पा मा’र्दा गाँ,जा समातिएको थियो ।
भारतीको फ्ल्याटबाट उक्त गाँ,जा ब’रामद भएको हो । भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियालाई ए’नसीबीले बोलाएको थियो ।लामो सोधपुछपछि भारतीले गाँ,जा से’वन गरेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । यद्यपि हर्षलाई सोधपुछ गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भारती द कपिल शर्मा शो की चर्चित कलाकार हुन् । अब उनि शोमा रहने नरहने भन्ने कुरा अन्यौल भएको छ ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार ए’नसीबीले भन्यो कि भारतीको घरबाट ८६.५ ग्राम गाँ,जा ब’रामद गरिएको छ । साथै, सोध पुछको क्रममा ती दुबै जनाले गाँ,जा हो भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् । उनीहरू दुबै जनाले गाँ,जा से’वन गर्ने गरेको कुरालाई स्वी’कार गरेका छन् । यसले भारतको प्रहरी नै च’कित बनेको छ । यो प्रकरणले अहिले भारतलाई तताएको छ । यो तहका कलाकारसम्म यस गलत कार्यमा फ’सेको प्रमाणले सबै च’कित बनेका छन् । बयानले प्रहरीपनि च’कित भएको छ ।